Dubai Spice Souk | Ahịa nwere ụdị ose ọ bụla na ahịhịa a pụrụ ichetụ n'echiche
| Ịdebanye aha onye nnọchiteanya | Kpọtụrụ
Njegharị na njem mmụta
Mmadụ Bịa na ose nke ukwuu
Saffron, nwanyị, nutmeg, ahịhịa, ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ, potpourri, mkpụrụ osisi akpọnwụwo, okooko osisi akpọnwụwo, mkpụrụ osisi, tii, shisha, frankincense, textiles, senti, ude nke ngwa nri dị iche iche, ihe a niile na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ihe ị ga -ahụ n'ahịa ahịa ose dị na Dubai. . Emi odude ke Deira, dị nnọọ nfe ole na ole site na ama ama Gold Souk, warara alleys nke Dubai Spice Souk brim na ụdị ọ bụla nke ose na ahịhịa pụrụ ichetụ n'echiche. Ọ dị n'ofe ọdụ ụgbọ oloko Al Ras, naanị nkeji ole na ole ka ọ ga-aga. Ahịa ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri ise.
A na-ebu nnukwu akpa maka warawara warawara na obere ụlọ ahịa ka ndị ọbịa soro na ụlọ ahịa mepere emepe na nke mechiri emechi. Ịkwụ ụgwọ ego bụ ụzọ kacha esi akwụ ụgwọ. Ọ ka mma iyi ihe kwesịrị ekwesị n'oge njem ị na -aga souk na -esi ísì ụtọ n'ihi na mpaghara a bụ obere nchekwa. Ebe a bụ akụkụ ga-etinyerịrị na njem ndị njem. Mmadụ nwere ike zụta ọtụtụ ihe n'ahịa na -esi ísì ụtọ n'emeghị oghere n'akpa. Aghụghọ bụ ịzụ ahịa ma bepụ onwe gị nkwekọrịta dị egwu.
Ndị ọrụ nọ n'akụkụ souk nwere omume enyi, na -anabata ma nwee nnukwu ihe ọmụma banyere ihe ndị a na -ere. Ha na -ahapụ gị ka ị were nkwanye ugwu see foto nke ihe niile, echefukwala ma ọ bụrụ na ị pụọ ebe ahụ ịzụrụ ihe. Ọ na -amasị ha ịmara obodo i si wee malite mkparịta ụka gbasara obodo gị. Ọtụtụ n'ime ha ga -enye gị ọtụtụ echiche maka otu esi eji ngwa nri dị iche iche na uru ha. Mgbe m gara ebe ahụ, ha nọgidere na -agwa m 'bata, lee anya ma nọrọ ntakịrị.
Ebe a na-ere ahịa nwere ngwa nri na ihe ndị ọzọ niile egosipụtara nke ọma, n'ime akpa, ekpokọta otu n'akụkụ nke ọzọ. Egwurugwu nke agba na-adọta onye ọ bụla na-agafe na ị nweghị ike iguzogide mana kwụsị wee lelee ya. Ebe ahụ mara mma, mara mma, na ísì ụtọ. Ọ bụ oriri n'anya anya, a na-ekelekwa gị site na ngwakọta nke isi ka ị na-agafe ahịa ihe ụtọ ọdịnala dị na mpaghara ihe nketa Dubai. E wetara m akwụkwọ nri na-esi ísì ụtọ. Ụdị tea dị iche iche na-esi ísì ụtọ sitere n'akụkụ dị iche iche nke ụwa masịrị m ma mesịa zụta ole na ole. E nwekwara ụdị mkpụrụ osisi, mmanụ, saffron, na mkpụrụ osisi akọrọ. A na-ere ngwa nri dị arọ na ngwugwu.
Middle Eastern na Arabic ngwa nri na-adọrọ uche gị, mara na enweghị ụkọ nri mba ụwa. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị isi nri, ị ga-ahụ ebe a n'anya. Zụta ngwa nri sitere na subcontinent na ngwa nri Arabic ka ịtinyekwu ụtọ na ntụziaka gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọpụta ihe ụtọ ihe mgwa ga-agbakwunye na uzommeputa tupu esi ya, nke a bụ ebe maka gị. Ụlọ ahịa ndị ahụ na-enyekwa chọkọleti ndị na-adịghị ahụkebe, ụfọdụ ndị e ji mmiri ara ehi kamel mee na ọgwụ ọdịnala. A pụkwara ịhụ ihe ịchọ mma, arịa, chandeliers, pashmina, kateeti, ihe ndị e ji emepụta ihe, na ọla n'ebe ndị dị ka Peshia, Ịtali, Kashmir, Turkey, na ndị ọzọ.
Ahịa ọhụrụ na -abịa kwa ụbọchị, site na mba dịka India, Pakistan, na Iran. Souk bụ ebe mara mma maka ndị njem nlegharị anya. Enwere ike iji ihe na -esi ísì ụtọ buru ebu ụlọ maka ihe onwe onye ma ọ bụ nye ndị enyi na ndị ezinụlọ ihe ncheta. Dubai Spice Souk bụ ahụmịhe na -atọ ụtọ nke mmadụ na -agaghị echefu.
By eze 21|2022-05-23T17:53:26+05:30January 22nd, 2019|blog|Comments Off na Nnọọ na nnukwu ose
Ekekọrịta a Story, Họrọ Your Platform!
Ebumnuche Dubai na -enye gị ntakịrị nkọwa banyere ihe gara aga Dubai, ugbu a na ọdịnihu
Ahụmịhe dị ịtụnanya na Parks Dubai na Ebe Ntụrụndụ
Ihe ọ bụla nke Qasr Al Watan na -eju gị anya
Ọcụ, ntụrụndụ na ịhiụrị ọ allụ niile nọ n'otu ebe
XDubai tụrụ ụwa n'anya site na iji zip zip na -akpali akpali gafee ...
Frame Dubai bụ ihe nnọchianya nke 'okpokolo agba' na -adọrọ mmasị ...
Ị nọ n'ọnọdụ maka mkpali? Kedu maka igba-agba ...
Qasr Al Watan na -anabata gị n'ime ụwa Arab ...
Warner Bros. World, Abu Dhabi, ogige isiokwu na -anabata gị ...
Nchịkọta Njem Dubai
MICE na Dubai
MICE na Abu Dhabi
Onye ọrụ nkwekọrịta
Nwebisiinka 2009-2017. Royal Arabian Ebe njikwa. Dubai, United Arab Emirates. ® Ikike niile echekwabara.
Njikọ njikọ ibe
Gaa na Top